Resaky ny mpitsimpona akotry : ala-nenina | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ala-nenina
Par Les Nouvelles sur 18/04/2017
Asa izay fanaovana tsirambina nanome vahana ny fanenjehan’olona manana mpiaro mahefa toy I Claudine Razaimamonjy. Sa kosa efa vontom-pinoana amin’ny filazana azy mahefa ary tsy miankina eo am-panatanterahana ny andraikitra nankinina aminy ireo sampana voatondro hiady amin’ny kolikoly sy amin’ny asa maloto fanodikodinam-bola ary amin’ny fanadiovana vola maloto. Tongotra mby an-dakana izao sarotra ny fiverenan-dàlana. Ny tany ama-monina sy ny solontenan’ireo fikambanana sy firenena avy any ivelany izay monina eto an-toerana nohon’ny fiaraha-miasa dia efa samy sendaotra avokoa ary nisy aza tsy nifehy tena intsony tamin’ny fanehoana fampitandremana. Tsy vitan’ny hoe rano raraka tsy azo raofina iny raharaha Claudine Razaimamonjy iny, fa karazana fisantarana tatatra vaovao ampikoriana rano fanadiovana. Araky ny fahatazanana azy dia be ireo mpanosika ka mety ahery ny onja isarika ny loto sy andrendrika an’izay maloto. Voahotsankontsana avokoa amin’ izany ireo lakanjejo mivesatra zava-tsoa maramara fihaviana. Nofinofy ny vokatry ny fampisehona hery amin’ny fitadiavana hivoy anoherana ny onja, manaraka ny onja sy manamorona sisiny alohan’ny fivarinana any Farahantsana sisa fiala-nenina ahazona anavo-tena.
Ahiana hitaky fandeferana be izany fomba fanavotan-tena izany. Ho tonga hatrany amin’ny famelana an’ireo mpiray dia teo aloha ho sorona. Mety amparofy anefa izany raha mangadihady ny manodidina, rehefa jerena tsara naman’ny tsy fahaizan’ ny tena ihany ny nahafahan’ireo hazo feno lay teo ankilan’ny tena niroboboro nefa tsy hita iankinana fa boboka avokoa.
Toy ny tena ihany ireo fahavalo mpifaninana miandry kendry tohina, tsy mamindra fo amin’ny malemy, tsy mijery an’izay farofy na lavo voahitsakitsaka raha sakatsakana eo amin’ny làlana diavina. Maro ireo ohatra mahazatra amin’ny fitenenana mitory ny fisehon’ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao, na mikasika ny fandraofana voankazo diso masaka na fitsimponana kitapo latsaka. Tsy mila akory fandrombana fa lasa toy ny fanefana adidy sy fanaovan-tsoa ny fandraofana fitondrana nirodana ho azy. Tsy mbola tonga amin’izay akory, fa efa manamoron-kady izay mety hivarinana raha mikiry tsy hiova famindra amin’ ny fanamparan-kery ka na efa tafitohina aza dia tsy tia ahalala afa-tsy ny bao tsy mivily. Maro ireo mpanararaotra miandry paiso latsaka, tsy latsak’izany koa ny isan’ireo mpanoro vohana manodidina, tsy mitsinjo lavitra jambenan’ny fitiavan-kely maimaika.